Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FCCPB si Nigeria & ụwa | TAA
President Comoros kwụsịtụrụ ikpe ụlọikpe
Chris Smalling na-eleghara asịrị nke Manchester United pụọ
Home Tags FCCPB
Ụlọ Nzukọ Mba na-agba ume ka ọ bụrụ na ị ga na-agba ọsọ ọsọ ọnụ na Bill Competition Bill
Ndị Nigeria Employers Consultative Association (NECA) na Wednesday na Lagos kpọrọ Nọọmenti Mba ahụ ka ha mee ngwa ngwa nke nsụgharị kwekọrọ na Federal Competition na Consumer Protection Bill (FCCPB).
Chris Smalling kwuru na ọ na-eleghara okwu ọ bụla ọ ga-ahapụ Manchester United n'oge okpomọkụ a.
Onye isi oche nke Comoros kwụsịtụrụ Ụlọikpe Iwu, ụlọikpe kachasị elu na mba ahụ, na mmegide a na-akpọ onye mmegide na mba agwaetiti India.
Ndi NANS choro isi ochichi Ondo na ugwo ulo akwukwo Adejinle Ajasin
Òtù Na-ahụ Maka Ụmụaka Naijiria (NANS) na Satịdeị jụrụ 50 pasent nke ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ maka ịlọghachi ụmụ akwụkwọ nke Adekunle Ajasin University, Akungba Akoko, (AAUA) na Ondo State site n'aka gọọmentị steeti.
Germany: Bashar Al-Assad apụghị ịbụ akụkụ nke ngwọta Syria
Nsogbu ndi agha Siria choro ka ha kwadoro ngosiputa banyere ike nile di na mpaghara a, onye ozi ala di iche-iche Germany nke mba ala bu Heiko Maas kwuru na Monday, na-agbakwunye na o nweghi ike iche n'echiche onye obula ji ndi agha eji agha agha megide ndi nke ya ka ha soro n'omume a.
Ọnụ ọgụgụ Montenegro maka onye ndu ọhụrụ na ndị na-ahụ maka ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ abanyela
Ndi Montenegro weputara onu ogugu nhoputa onu ogugu ndi ozo choro ihu onye isi ochichi isii nke mbu bu Milo Djukanovic hoputara dika onye isi nke mba obere Balkan nke choro isonyere EU.
Ndị kidnappers hapụrụ twins isi Ibadan mgbe N10m mgbapụta
A tọhapụrụ ụmụ ejima nke Olun Olubadan nke ala Ibadan, Dr. Lekan Balogun, site na ndị a na-enyo enyo na ha jidere ha na nne ha n'ihu ụlọ ezinụlọ na Akobo n'ógbè Ibadan n'izu gara aga.
'Nwoke nwere ihu atọ' nwere nkeji abụọ
Jerome Hamon na-eji ya eme ihe ọhụrụ "onye nwere ihu atọ".
NAPTIN na-amalite ọzụzụ nke ndị engineer 300 TCN
Gọọmenti nri na-anakwere iwu ntụrụndụ maka NAPTIP
CP Garba Umar gbara ndị football Fans ume ka ha ghara ịlụ ọgụ
European Union kwadoro udo udo nke South Sudan